Semalt: Free Software Fandinginana tranonkala ho an'ny Newbies sy Real Pros
Mifanohitra amin'ny programim-pamokarana,. Ankoatra izany, malemy amin'ny matematika izy ary mitady fomba tsotra hikapoka na hanangona tahirin-kevitra, hanatontosana ny andraikiny amin'ny aterineto. Raha toa ka tsy mpizahantatra mifandraika aminà asa maromaro ianao, dia azonao atao ny manandrana ireo rindrambaiko na rindrambaiko hanaparitahana ireo tranonkala.
Ny fandrosoana dia mahery vaika Google Chrome. Fampihetseham-po tsotra nefa mahavariana amin'ny fanasarahana pejy tokana tokana sy maromaro ary fampivoarana ny angon-drakitra voarakitra ao anaty tabilao. Azonao ampiasaina io programa io raha tsy manana Chrome ianao ho toy ny tranonkalan'ny tranonkala voalohany.
Ny scraper dia hamerina mijery ny pejy Internet anao ary mamoaka ny angona azo avy amin'ny zavatra takinao. Tsy manolotra safidy tsy hita isa izy fa manana fifandraisana amin'ny mpampiasa.
API Twitter sy Facebook
Amin'ny fampiasana ny API Facebook sy Twitter, mora ho anao ny mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala maro. Azonao atao ny mandinika ireo tranonkala mpifaninana aminao ary manara-maso ny teny fanalahidyo. API no sehatra izay mamela ireo fitaovana antoko fahatelo hidirana amin'ny media sosialy amin'ny programa. Ny API ao amin'ny Facebook sy Twitter dia afaka miditra amin'ny fomba samihafa; Afaka manangona, manaparitaka ary mamoaka vaovao avy amin'ny tontolon'ny media sosialy araka izay irinao ianao.
Ity dia mahery iray ary iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fanasitranana tranonkala sy programa momba ny harena ankibon'ny tany. Import. io no safidin'ny iray amin'ireo tsy mpandrindra ny programa sy ny mpamorona fampihetsiketsika. Azonao ampiasaina ity fitaovana ity mba hanefana ny angona avy amin'ny URL samy hafa ary mamorona API anao araka ny zavatra takinao. Miaraka amin'ny Import. Izany, afaka mahazo vokatra tsara ianao ao anatin'ny segondra vitsivitsy. Ity programa ity dia ahafahanao misafidy ny angon-drakitra ary manendry pejy web amin'ny alàlan'ny bokotra-tsindrio. Hikaroka vohikala samihafa ho anao hahitanao ny angon-drakitra mety hivoaka.
Kimono Labs no hany fitaovana amin'ity lisitra ity izay tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama. Raha tsy programmer ianao, tokony hifidy ny dikan-teny maimaim-poana ianao ary tsy mila mandany vola be loatra amin'ny tetikasa fandrindrana data. Ary raha mpandamina programa na mpikirakira matihanina ianao dia voatery hampiasa ny volavolan-dalany nomena anao izay handoitra ny $ 20 ka hatramin'ny 30 $ amin'ny fepetra takinao sy ny drafitra nofidinao.
Ireo fampihetseham-piraisam-peo ireo dia mety ho an'ny mpandrindra. Izy ireo dia mora ampiasaina ary tonga miaraka amin'ny fanohanana an-tserasera. Ankoatr'izay, ireo fampiharana rehetra ireo dia mamerina ireo antontan-kevitra avy amin'ny tranonkala sy ny bilaogy fototra, nefa tsy manelingelina ny fotoana sy ny kalitaony. Farany, fa tsy ny kely indrindra, ireo fampiharana ireo dia afaka manitsy ny angon-drakitrao ary manala ny fahadisoana diso Source .